Ejipta : tsy mitsahatra ny fisamborana ireo mpitoraka bilaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Febroary 2009 6:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, عربي, বাংলা, English
Mbola lasibatry ny mpitandro ny filaminana sy ny manam-pahefana hatrany ny mpitoraka bilaogy Ejiptiana. Nandritra ny herinandro fotsiny izao dia efa mpitoraka bilaogy 2 no voasambotra. Ny nanombohan'ny tantara anankiray amin'ireo dia ny diabe natao hoe “ho any Gaza” nokarakarain'ny mpanao pôlitika mahery fihetsika 14 avy any Ejipta, Etazonia, Angletera, Espaina, Pôlôna ary Frantsa ho fiombonana amin-dry zareo Palestiniana. Tsy nanaiky io diabe io ny mpitandro filaminana ka nisambotra ireo mpanao pôlitika mahery fihetsika ireo niaraka tamin'ny mpanao gazety vahiny, nentina nihodikodina tao Le Caire alohan'ny nanariana azy ireo tany an'efitra sy tany amin'ny braon'ny pôlisy rehetra tany.
Novotsorana avokoa ireo mpanao pôlitika mahery fihetsika rehetra afa-tsy anankiray ihany, terantany Alema-Ejiptiana, mpitoraka bilaogy antsoina hoe Philip Rizk. Nalain'ny manam-pahefana an-keriny izy io noho ny antony tsy dia mazava loatra, tsy nisy nahita ny nasiana azy ary tsy afaka miresaka amin'ny mpisolo vava azy sy ny fianakaviany ary ny namany akory izy.
Teo aloha dia nikasa hisambotra ny rain'i Philip, Magdy Rizk, ny pôlisy ; rehefa tsy nety nanaraka an-dry zareo ilay rangahy dia nidirany an-keriny ny tranon'i Philip.
Io ambony ny vaovao farany rehetra navoakan'ny Droubi ao amin'ny Jaiku omaly.
Afaka vakiantsika ny andinindininy tamin'ny nangalana an'i Philip Rizk an-keriny araka ny hitan'i Sara Carr vavolombelona nanatri-maso ny zava-niseho. Araho ny tohin'ny toe-draharaha mikasika an'i Rizk sy ireo vaovao hafa ao amin'ny bookmarks, Benwhite, Free Philip sy Facebook group. Afaka jerena koa ao amin'ny Twitter .
Ilay mpitoraka bilaogy Palestiniana, Laila El Hadad, no milaza ny heviny mikasika ny fisamborana an'i Rizk :
Aoka ho fantantsika fa tsy i Philip irery no tratry ny toe-javatra tahaka izao. Am-polony maro isan'andro ireo mpanao pôlitika mahery fihetsika Ejiptiana voasambotra, entina any amin'ny toerana mangina ary ampijalian'ny pôlisy miafina Ejiptiana of Egyptian. Tsy ela fa vao tamin'ny herinandro lasa dia mpikambana 50 mahery ao amin'ny Firahalahian'ny Silamo,”Muslim Brotherhood organization” no nosamborina taorian'ny fitokanana nataon-dry zareo ho an'i Gaza, ary efa mahatratra 500 no voasambotra hatramin'ny volana lasa.
Araka ny filazan'i Kareem Atef [Ar] sy The Arabic Network for Human Rights Information ary Global Voices Advocacy, dia nisy olona faharoa koa no lasibatra ka nosamborina nanoloana ny trano fonenany ny 6 Febroary lasa teo, dia i Diaa Gad :
Manafika sy maka an-keriny mpitoraka bilaogy ny pôlisy Ejiptiana
Tao anaty fiaran'ny mpitandro filaminana foibe ireo miaramila talohan'ny nidirany a-keriny tao an-trano. I Dia’ Eddin Gad dia mpanoratra ao amin'ny bilaogy Sawt Ghadib na An Angry Voice http://soutgadeb.blogspot.com. Tsy nanome fanazavana mikasika ny anton'ny fisamborana na ny antony nitazonana azy ny pôlisy.
Mpanao pôlitika mahery fihetsika sy mpitoraka bilaogy Ejiptiana maro no mitaky ny famotsorana an'i Rizk sy Gad, sy ireo mpitoraka bilaogy maro hafa migadra, amin'ny alalan'ny vaovao sy innovative ways. Na izany na tsy izany dia tsy misy fihatsarany ny toe-draharaha ary mbola mitohy hatrany ny fisamborana ireo mpitoraka bilaogy.
Hafanàm-po nomerika 08 Oktobra 2020